Football Khabar » ७ गोल भएको खेलमा रेड बुलमाथि लिभरपुलको कठिन जित : सालाह बने हिरो !
७ गोल भएको खेलमा रेड बुलमाथि लिभरपुलको कठिन जित : सालाह बने हिरो !
७ गोलको वर्षा भएको खेलमा साबिक च्याम्पियन इंग्लिस क्लब लिभरपुलले युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा संघर्षपूर्ण जित निकालेको छ । नेपाली समयअनुसार बिहीबार बिहान भएको समूह चरणको दोस्रो खेलमा उसले अस्ट्रियन क्लब रेड बुल साल्सबर्गमाथि ४–३ को जित निकालेको हो । कुनै बेला खेलमा ३–० को सहज अग्रता बनाएको लिभरपुलले त्यसपछि भकाभक ३ गोल खाएपछि उसलाई खेल जित्न ठूलै संघर्ष गर्नु परेको थियो ।
एनफिल्डमा पहिलो रोजाइका खेलाडी लिएर उत्रिएको लिभरपुलले खेलको नवौं मिनेटमा साडियो मानेको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । त्यसपछि २५औं मिनेटमा आन्ड्रेय रावबर्टसनले सुन्दर गोल गरेपछि लिभरपुल खेलमा २–० ले अघि रह्यो । फेरि खेलको ३६औं मिनेटमा लिभरपुलका लागि मोहमद सालाहले गोल गर्दै खेल ३–० बनाए ।
तर, तेस्रो गोल खाएको ३ मिनेटपछि नै रेड बुलका लागि ह्वाङ ही–चानले गोल गरेपछि खेलको पहिलो हाफ ३–१ मा टुंगिएको थियो । दोस्रो हाफमा केही नाटकीय मोड देखिए । जहाँ ३ गोल भए । खेलको ५६औं मिनेटमा रेड बुलका लागि ताकुमी मिनामिनोले गोल गर्दै खेल ३–२ बनाए । लगत्तै ४ मिनेटमै इर्लिङ ब्राउन हल्यान्डले गोल गर्दै भ्रमणकारी टोली रेड बुललाई पूर्णत खेलमा फर्काए, खेल ३–३ भयो ।
तर, त्यसपछि रेड बुलले पोस्ट जोगाउन सकेन । खेलको ६९औं मिनेटमा लिभरपुलका लागि सालाहले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि खेलमा घरेलु टोलीले ४–३ को लिड लियो । अन्ततः सोही अग्रता जोगाएर लिभरपुलले खेल जित्यो ।
अब यो जिपछि लिभरपुल दुई खेलमा एक खेल हार र एक खेलमा जितसहित ३ अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा छ । एक खेलमा जित र एक खेल बराबरी गरेको नापोली ४ अंकसहित सिरानमा छ । पराजित रेड बुल ३ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ ।
प्रकाशित मिति १६ आश्विन २०७६, बिहीबार ०३:०२